Mercedes-Benz waxay soo bandhigeysaa xariiqeeda qalabka ee loogu talagalay iPhone, iPad iyo laptop-yada | Wararka IPhone
Maaha wax cusub in shirkadaha aan shaqo ku lahayn qaybta tikniyoolajiyadda macaamiisha ay ka soo galaan khadadka agabka. Waxa ugu dambeeya ee sidaa sameeya waa Jarmal Mercedes-Benz. Waxay soo bandhigtay a khadka buuxa ee kiisaska iPhone iyo sidoo kale fiilooyinka USB, garabka garabka, kiisaska iPad iyo xitaa boorsooyinka laptop.
Mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee looga dhex muuqan karo isticmaaleyaasha kale ee isla taleefankaaga gacanta wata waa adigoo isticmaalaya dabool difaac Xaaladdan oo kale, Mercedes-Benz waxay rabtaa inaad ku darto liistada aad rabto qaar ka mid ah sharadkeeda cusub ee waaxdan. Sidoo kale, haddii aad sidoo kale haysatid iPad ama laptop-ka Apple, waxaad sidoo kale yeelan doontaa xulasho.
Moodooyinka ku raaxeysan kara daboolida ka hortagga Mercedes-Benz waa: iPhone 7/8, iPhone 7 Plus / 8 Plus, iPhone X. Iyo moodooyinka aan heli karno waxay ka kooban yihiin unugyo ka sameysan aluminium; cutubyo isku daraya kaarboonka - dhabta ah, ee aan sameysneyn - iyo maqaar, iyo sidoo kale maqaar kaliya. Xaaladda dambe, waa maqaar daloollan - sida giraangiraha isteerinka badan. Intaa waxaa sii dheer, waxaad sidoo kale yeelan doontaa daboollo silikoon ah oo gudaha ka mid ah uu ku daboolan yahay microfiber si uusan u dhaawicin qafiska xarunta.
Dhanka kale, illaa iyo inta laga hadlayo iPad-ka, waxaan sidoo kale lahaan doonnaa kiisas difaac ah oo isku nooc ah, iyo sidoo kale garbaha garbaha loogu talagalay qalabka leh inta udhaxeysa 8 iyo 10 inji shaashad, iyo sidoo kale boorso iyo shandad loogu talagalay laptops ilaa 15 inji. Dabcan, kiisaska dambe waxaan lahaan doonnaa boorsooyin iyo shandado boorsooyin kujiraan gudaha.
Ugu dambeyntii laakiin ugu yaraan, Mercedes-Benz iyo shirkadda CG-Mobile Waxay sidoo kale ku soo bandhigayaan astaamaha astaanta gaariga laba baytariyada dibedda ah oo leh jiis isku dhafan birta iyo maqaar - waxay leedahay awoodo 5.000 y 10.000 milliamps- sidoo kale waxay bixin doontaa a USB-ga USB-C ama hillaaca danabtiisa —Waxay leedahay isku-xira laba-laab ah. Qiimaha dhammaan qalabkan waa in la xaqiijiyaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Mercedes-Benz waxay soo bandhigeysaa xariiqda qalabkeeda loogu talagalay iPhone, iPad iyo laptops
Carshiga Birta, u dagaallama inaad boqorka ka dhex ahaato cayaartoyda adduunka oo idil